"Inotyisa Firimu Regore" mubhaisikopo: Trailer inosemesa - poindi yemutambo - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 6, 2022 | mafirimu uye series, nhau
NeRima & Ivo Vakaipa, firimu idzva rinotyisa riri kutanga mumabhaisikopo - uye turera inazvo zvese. Iyo portal Screen Anarchy yakatsanangura iyo firimu muongororo se "inotyisa firimu regore". Mushure mezvose, iyo yepamusoro inoratidzika kunge iri mukati menzvimbo yekugoneka, sezvinoratidzwa netrailer inotyisa.
Rima & The Wakaipa ifirimu rinotyisa rinotungamirwa naBryan Bertino, aimbotungamira The Strangers kana The Blackcoat's Daughter. Basa rake idzva rakatanga kuFantasia International Film Festival muzhizha ra2020 uye rakaburitswa muUS mwedzi miviri gare gare kuburikidza neRLJE Films. iyo firimu yakarongerwa kurova mafirimu musi waApril 14, 2022.
Trailer inoratidza dhiyabhorosi kurima kunotyisa
Julie-Oliver Touchstone (kusanganisira Muparidzi), Xander Berkeley (Candyman, Barb Wire) naMarin Ireland, anozivikanwa kubva kuY: Murume Wekupedzisira, vanotamba muRima & The Wicked. Turera inoburitsa zvishoma nezvenyaya yacho zvachose, asi chimiro chakakwana kuti chityise zvishoma: Vanun'una vaviri vanodzoserwa kumhuri yavo papurazi rekare muTexas. Amai vacho vanoratidzika kuva vanopenga uye vanorembera vakafa mudura humwe usiku, chokwadika pashure bedzi pokunge vacheka zvigunwe zvishoma mukicheni.
Hameno kuti sei chaizvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka papurazi. Kupenga kwakachena kana masimba akaipa kana zvose? Kanenge karavhani kekuti pamwe "inotyisa firimu regore" inosiya vataridzi vaine mibvunzo isina kupindurwa. Iyo mifananidzo yekutyisa dzimwe nguva haina kunyanya kujeka: iyo snippet yekuzivisa yatove ine imwe kana imwe inosemesa kutevedzana kunoitawo kuti kutyisa kuonekwe. Uye nekuti imhando yefirimu rinotyisa repapurazi, dhiabhori haashaikwewo.
Kubva pakati paKubvumbi 2022, vateveri vanogona kuzvionera vega kuti Rima & The Wakaipa iri "bhaisikopo rinotyisa kwazvo regore" kana kuti vatsoropodzi vanga vakanyanya kufara.
Rima neVakaipa [Blu-ray]  * 18,65 EUR tenga
Kare Star Wars Eclipse: Kuburitswa kunoda moyo murefu kubva kune vateveri
Inotevera Digital Board Games: Nyowani shanduro yeDominion iri pano
Assassin's Creed Valhalla: Chikunguru mwaka urikumhanya - Kisimusi ine demo uye mead
Asymmetrical worker placement board game Pendulum inoburitswa naTierra del Fuego